Google Mepu inogadziridzwa nekuuya kweiyo 'Yakakurumbira Maawa' basa | IPhone nhau
Iyo 'Yakakurumbira Maawa' basa rinouya kuGoogle Mepu app yeiyo iOS
Kana Google ichizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti ingangoita isingagumi sosi yeruzivo. Ndokusaka vanhu vazhinji uye vazhinji vachishandisa vakazvipira masevhisi ekambani kunyangwe ivo vachigona kusarudza pakati pevamwe varipo, uye izvi zvinogona kunge zviri zvemuno zveMepu kunyorera uye Google ndeyako kubva zvino zvichienda mberi. Uye ndezvekuti, kunyangwe chiri chokwadi kuti mamamepu eApple akavandudzika zvakanyanya munguva dzichangopfuura, ari kuita senge iyo yaanokwikwidza naye inosanganisa nhasi izvo zvinopedzisira zvaita mutsauko.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, mu Google Maps app yeIOS Iwe unozokwanisa kuwana chiitiko chaungangodaro wakamboshandisa kakati wandei muwebhu vhezheni, uko kwave kuripo kwenguva yakati, asi iyo inoratidzwa kekutanga mune yayo vhezheni yeApple nhare mbozha.
Pasi pezita rimwe chete iro ratakanga tajaira, 'Maawa Akakurumbira' achatiratidza ruzivo rwakakodzera nezve kuwanda kwevanhu kunzvimbo yakapihwa yakakamurwa nemaawa nemazuva, kuitira kuti tikwanise kuronga zvirinani kushanya kwedu kunzvimbo dzakatangwa. Pamusoro pezvo, rimwe basa rekuwedzera - iro risingawanikwe muzvitoro zvese-, richakwanisa kutiratidza kuwanda kwevatengi munguva chaiyo, yatinogona kuziva chaizvo mamiriro ezvinhu azvino kuti tiwane kana tikaendako.
Iri basa richava rerubatsiro rukuru uye kunyanya kuoneka kana tichishanyira mamwe maguta kana kuda kuziva zvakawanda nezvenzvimbo yatisingashanyire kazhinji kudzivirira matambudziko nekuda kwevakawanda vatengi chero nguva yakapihwa. Naizvozvo, kunyangwe iyo Apple Mepu application ichiramba ichinyatso kugadzikana nguva zhinji, pamusoro pekutipa isu kusangana kwakanaka nesystem, iyo bhalansi inoita senge inoramba yakasendamira zvachose kudivi reGoogle.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo 'Yakakurumbira Maawa' basa rinouya kuGoogle Mepu app yeiyo iOS
Zvishandiso zvinogona kuchinja icon muIOS 10.3
Shanduro yeGoogle chiriporipo inowedzera chiJapane kunyaya yemitauro yakatsigirwa